'दागले केही अर्थ राख्दैन, मिस नेपालमा जाने सोचेकी छु' (भिडिओ) :: Setopati
'दागले केही अर्थ राख्दैन, मिस नेपालमा जाने सोचेकी छु' (भिडिओ)
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन २७
२१ वर्षीया जेनी खड्का 'एसिड अट्याक सर्भाइभर' हुन्। उनको बायाँ चिउँडोभन्दा तल घाँटी, छाती र हातमा तेजाबले जलेको छ।
दुई वर्षअघिको घटनाले दिएको ज्यान र मनको घाउ आलै छ। तर उनी सबै चोट पन्छाएर आफ्नो पहिचान र कामको दायरा फराकिलो बनाउन लागिपरेकी छन्।
हालै मात्र उनले 'मोडल हन्ट नेपाल' मा सहभागिता जनाएकी थिइन्। मोडलिङ र फेसनमा सानैदेखि रूचि भएको बताउने जेनी नेक्स्ट मोडल्स नेपाल प्रालिद्वारा आयोजित मोडल हन्टको छैठौं सिजनमा सहभागी भए पनि समय अभावका कारण थप अगाडि बढ्न पाइनन्।
'समय नमिल्ने भएपछि यसपालि पछि हटेँ। अर्को वर्ष समय मिलाएर फेरि सहभागिता जनाउने सोचेकी छु,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
आगामी वर्ष मोडल हन्टमा मात्र नभई मिस नेपाल प्रतियोगितामै जाने योजना बनाएको उनी बताउँछिन्।
आफ्नो रूचि पछ्याउन अभियन्ता उज्वलविक्रम थापाले प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ। जेनीका अनुसार उज्वलले नै यस प्रकारको प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा करिअर बनाउन मद्दत हुने भन्दै सुझाएका थिए।
मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्न जेनीको आफ्नै फोटोले पनि प्रेरणा दिएको थियो। तेजाब आक्रमणपछिको जेनीको एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा धेरैले मन पराएका छन्। फोटोग्राफर अर्जुन शाहले खिचेको त्यो फोटोमा शरीरमा दाग भए पनि मनबाट जेनी निकै खुलेकी र सुन्दर देखिन्छिन्। यो फोटो उनले काम गरिरहेको संस्था 'सगुन' को त्रैमासिक पत्रिकाका लागि खिचाएकी थिइन्।
कारणवश उनको फोटोसहितको पत्रिका प्रकाशन हुन सकेन। तर फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो। यसमा मिलेको सकारात्मक र प्रोत्साहनजनक प्रतिक्रियाका कारण मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्ने आत्मबल मिलेको जेनी बताउँछिन्।
उनको फोटोमा धेरैले कमेन्ट पनि गरेका छन्- 'हामीलाई सानो दाग देखाउन पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। मान्छेले के भन्छन् भन्ने डर हुन्छ। तर तिमी दाग लिएर कति खुसी र खुलेकी छौ। हामीमा पनि तिमीमा जत्तिको आँट भइदिए हुन्थ्यो नि!'
एउटा फोटोबाटै धेरैले प्रेरणा लिएको महशुस गरेपछि जेनीले ठानिछन्, 'अझै खुलेर समाजमा उभिनसके कति सकारात्मक सन्देश पुग्छ होला।'
त्यसैले उनी मोडल हन्टमा लागेकी हुन्। अहिले उनी प्रतियोगितामा प्रत्यक्ष सहभागी त छैनन् तर कार्यक्रमहरूमा निम्तो आइरहन्छ।
त्यसबाहेक जेनी कुमारी बैंकमा जागिरे छिन्। गत असोज १ देखि लागू हुने गरी तेजाब आक्रमणमा परेका तीन युवतीलाई बैंकले रोजगारी दिलाएको छ। जसमध्ये काठमाडौंस्थित शाखामा जेनी र संगीता मगर नियुक्त भए। एक जना भने हेटौंडामा कार्यरत छिन्।
झन्डै ६ महिनादेखि जेनी बिहान साढे ८ बजे नै कीर्तिपुरबाट काममा जान्छिन्। मेकअप गर्न मनपराउने उनी घर बाहिर निस्किँदा सामान्य मेकअप गर्छिन्। दागले मान्छेको सुन्दरता परिभाषित गर्दैन र मेकअप आफ्नो इच्छा हो भन्ने मान्यता राख्ने उनी भन्छिन्, 'सुन्दरता मान्छेको मन र व्यवहारको हुन्छ, अनुहारको होइन।'
धेरैले आफ्नो काम, कौशल र जीवनका अरू पाटाभन्दा अनुहार र दागकैबारे सोधिरहँदा उनलाई दिक्क लाग्छ। पढे-लेखेका, युवा पुस्ताको पनि सोच बदलिन नसकेकोमा जेनीलाई अचम्म पनि लाग्छ।
'साथीहरूलाई भेट्दा उनीहरू मेरो घाउ कस्तो छ भनेर सोध्छन्। तँ कस्तो छस् भनेर सोध्दैनन्,' जेनीको गुनासो छ, 'उनीहरूले के बुझेको, के नबुझेको भन्ने? मेरो दागलाई सामान्य हिसाबमा लिएर बेवास्ता गर्न किन सक्दैनन्?'
समाजले सुन्दरताको आदर्श परिभाषा बनाएको छ। तेजाब आक्रमण भएकालाई मात्र होइन, कसैको अनुहारको दागलाई 'खोट' देखिदिन्छ। समाजको यही सोचाइले धेरैलाई हतोत्साही बनाउने जेनी बताउँछिन्। त्यसैले उनी मोडलिङमार्फत यो सोच परिवर्तनमा लागिरहेकी छन्।
जेनीका एक छोरा पनि छन्। उनीमाथि तेजाब आक्रमण हुँदा छोरा जम्मा डेढ वर्षका थिए। जेनीलाई उनकै श्रीमान विष्णु भुजेलले कालोपुल सडकमा तेजाब आक्रमण गरेका थिए। बीच सडकमा छट्पटाइरहेकी जेनीलाई एक महिलाले अस्पताल पुर्‍याएकी थिइन्।
जिन्दगीमा उतारचढाव आइरहे पनि जेनी सधैं हाँसिराख्छिन्, उनको सानैदेखिको स्वाभाव। घटनापछि कीर्तिपुर अस्पतालमा हुँदासमेत आफैंलाई समेट्दै हाँसिरहिन्। कहिलेकाहीँ अँध्यारो मुख देख्दा डाक्टरहरू भन्थे रे, 'आज जेनी किन हाँसिनन्?'
झन्डै डेढ महिना अस्पताल बसाइपछि उनी माइती बसिन्, कीर्तिपुरमै। तर घटनापछि उनी छोरा नजिक परेकी छैनन्।
'अब त छोराले मलाई चिन्दैन होला,' उनले भनिन्, 'एउटा संस्थाले उसको रेखदेख गरिरहेको छ।'
आफूसँगै राख्नुभन्दा संस्थामा राख्दा छोराको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेको बताउँदै उनी भन्छिन्, 'निकै सोचविचार गरेर यो निर्णय लिएकी हुँ। छोराको माया नभएको होइन। उसको भविष्य त्यहीँबाट राम्रो हुन्छ।'
जेनीले अस्पतालबाट फर्केको चौथो महिनादेखि सगुन संस्थामा काम थालेकी थिइन्। त्यहाँ उनी उपत्यका बाहिर समुदायमा गएर एसिड आक्रमण र जलनबारे बुझाउँथिन्। ठूलो समुदायमा आफ्नो उदाहरणसँगै जेनी जनचेतनाका लागि खुलेर पुग्थिन्। यसले पनि आफूमा थप आत्मविश्वास बढाएको उनी बताउँछिन्।
तिनै आत्मविश्वास र साहसका कारण जेनी अहिले निर्धक्क खुलेकी हुन्। आफ्नो सपना पछ्याउँदै मिस नेपालको प्रतिस्पर्धामा जाने तयारी गर्ने भएकी छन्।
'योजना बनाएकी छु। तर हेरौं के हुन्छ,' उनले भनिन्, 'मान्छेको सुन्दरता उसको मन र व्यवहारबाट तौलिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। बाहिरी दागले केही अर्थ राख्दैन भन्ने सोचाइ विकास गर्न खोजिरहेकी छु।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २८, २०७७, ०६:२८:००
टीका, जमरा र आशीर्वाद बोकेर कर्मथलो फर्किनेका तस्बिरहरू
३ राम्रा कोरियन फिल्म, हेर्नुहोस् युट्युबमा
चीन-भुटानले सीमा वार्ता अघि बढाउने सम्झौता गरेपछि भारत सशंकित
टी-२० विश्वकप: श्रीलंका र बंगलादेशले पहिलो चरणमा एसोसिएट टिमसँग किन गर्दैछन् प्रतिस्पर्धा?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित शून्य!
कपिलवस्तुमा फैलिएको झाडापखला नियन्त्रणमा आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी
महोत्तरीमा बोक्सी आरोपमा महिलालाई मलमूत्र खुवाउने ४ जना पक्राउ
रोल्पामा छुट्टाछुट्टै घटनामा दुई जनाको मृत्यु
बोक्सी भन्दै महोत्तरीमा आफ्नै भाउजूको हत्या